Aluminium Tripolyphosphate, Zinc Phosphate, Flake Glass - Noelson
LINE LINE PRODUCT
Raha te hahita mpamatsy sy mpiara-miasa azo antoka sy mendri-kaja indrindra ianao dia miangavy anao handeha ho any Noelson Chemicals.
PIGME ANTI-COROSION SPECIALTY
Isan-taona, ny fanoloana vy noho ny fahasimbana dia mitentina mihoatra ny $ 100 miliara eran'izao tontolo izao. Ny pigment izay mampihena ny vidin'ny harafesina dia loko manohitra ny harafesina. Noelson Chemicals dia namolavola sy nanamboatra loko anti-harafesina nanomboka tamin'ny taona 1996, ny vokatray dia miainga avy amin'ny mpameno tsy an-jaza ka hatramin'ny pigmente anti-harafesina manokana.
PIGMAR ANTI-COROSION PHOSPHATE
Noelson Chemicals dia namolavola sy nanamboatra loko pigioma anti-harafesiana Phosphate nanomboka tamin'ny taona 1996. Ny vokatray dia misy avy amin'ny Zinc Phosphate, Compound Zinc Phosphate, Phosphorus Zinc Chromate, Aluminium Tripolyphosphate, Orthophosphate & Polyphosphate ary Spectrum Phophates.
PIGMONY COLORX INORGANIC COLOR PIGMENT & PORSY METAL OXIDE MIXED
Ny pigmen-loko tsy dia matevina dia vahaolana mafy na fitambarana misy oksida metaly roa na maromaro, ny oksida iray dia mpampiantrano ary ny oksida hafa dia mifangaro ao anaty valin'ny kristaly mpampiantrano. ity inter-diffusing ity dia tanterahina amin'ny maripana amin'ny ankapobeny 700-1400 ℃. Noelson Chemicals dia manolotra paleta feno vahaolana tsy loko voajanahary izay manome anao loko marobe tadiavinao amin'ny plastika, fingotra, fonosana, inks, fananganana ary seramika anao.
PIGMON OXIDE IRONY
Ny oksida vy dia iray amin'ireo pigment anti-harafesina indrindra. Ny pigment oxide vy misy antsika, asongadin'ny oxide vy mangarahara sy ny manga ultramarine, dia roa amin'ireo vokatra vy oksida Noelson Chemicals natokana ho an'ny mpanjifa.
Ny pigmen anorganika dia miavaka amin'ny eco-friendly sy ny fahaizan'ny rehetra. Noelson Chemicals dia natokana ho an'ny fampandrosoana sy ny fananganana pigment anorganika nanomboka tamin'ny 1996.
FLAKE Flake & MICROSPHERES GLASS
Taorian'ny orinasa Japoney Nippon Glass sy British Glass Flake, Noelson Chemicals no mpamokatra Glass Flake fahatelo lehibe indrindra. Ny vokatray dia manomboka amin'ny C ka hatrany amin'ny flakes E-vera, hatrany amin'ny microspheres fitaratra ary microspheres ceramic.
SARY MAHARITRA & ANTI-STATIKA
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 1996, Noelson Chemicals dia nahazo ny tombony amin'ny fifaninanana amin'ny loko pigmente sy anti-static. Ny vokatray dia manolotra fanoherana mitarika indostrialy amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ny kalitao faran'izay tsara + Teknika famoronana + tombony amin'ny vidiny, ataovy izay hahatonga an'i Noelson Chemicals hihoatra ny teo alohany sy ny ho aviny!
PLASTIKA & VOAFANA
Momba ny Noelson Chemicals
Niorina tamin'ny taona 1996, Noelson Chemicals dia mpanamboatra natokana ho an'ny akora simika manokana, miaraka amin'ny fananganana Noelson Chemicals Nanjing Ltd., Noelson Chemicals Shanghai Ltd. ary Noelson Int'l HongKong, mampihatra teknolojia avo lenta amin'ny famokarana vovo-micro , loko fanoherana ny harafesina, fiasa, fitondran-tena ary fanoherana ny static. Ny vokatray dia atokisana ary eken'ny marika lehibe iraisam-pirenena.
Vokatra MAILONELA NOELSON